၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားပေးသင့်ပါသလဲ – Healthy Life Journal
Q. အခုလို ၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ ကလေးတွေ ကျန်းမာပြီးဉာဏ်ကောင်းနေအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားသင့်၊ ရှောင်သင့်ပါသလဲ။
A. ၁၀ တန်း စာမေးပွဲနီးချိန်မှာ များသောအားဖြင့် စိတ်ပူပင်မှုတွေ အရမ်းများလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အစားအသောက်စားတဲ့အခါ နည်းနည်းလေး ပြောင်းပေးရပါတယ်။ တကယ့်ကို အာဟာရဖြစ်စေတဲ့၊ အဆီအအိမ့်မများတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားပေးရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ညညဆို ကြက်ပြုတ်ရည်၊ ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်စွပ်ပြုတ်သာမက ဘယ်စွပ်ပြုတ်ရည်မဆို (ဥပမာ- ငါးစွပ်ပြုတ်ရည်၊ ပဲဟင်းချို)စတာတွေကို သောက်လို့ရပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်တွေထဲမှာ ဖရုံသီး၊ ကျောက်ဖရုံသီး၊ အရွက်လေးတွေထည့်ပြီး သောက်လို့ရပါတယ်။ အခုခေတ်အခေါ်အနေနဲ့ ဟော့ပေါ့ကို သောက်ပေးရင် ဒီအထဲမှာပါတဲ့ပရိုတင်းဓာတ် အမိုင်နိုအက်စစ်က ၁၀ တန်းကလေးတွေရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ၁၀ တန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မှတ် ဉာဏ်ကို ပိုပြီး ကောင်းစေချင်တဲ့အတွက် ဇင့်ဓာတ် (Zinc)လိုပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစေ့အဆန်၊ ကြက်ဥစတာတွေကို စားသောက်သင့်ပါတယ်။ နို့ကိုလည်း သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အဓိက ရှောင်သင့်တာက အဆီများတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-ဟင်းအနှစ်နဲ့ ထမင်းကိုနယ်စားတာမျိုး၊ အထူးသဖြင့် ညစာစားတဲ့အခါမှာ ဟင်းအနှစ်နဲ့ ထမင်းကိုနယ်စားတာကို ရှောင်ရပါမယ်။ ဝက်ဆီတုံး၊ ဝက်ခေါက်ကင် စတဲ့အဆီများတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရှောင်ရပါမယ်။
ကလေးတွေ ညဘက်စာကျက်တဲ့အခါ မအိပ်ချင်အောင် လက်ဖက်ရည်သောက်ကြတယ်။ ဒါကိုလက်ခံပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ Green Tea လက်ဖက်ရည်သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့တွေက မအိပ်အောင်ဆေးဝါးသုံးတာ၊ အက်ဖတမင်းပါတဲ့အရည်တွေ သောက်သုံးတာကို မလုပ်သင့်ပါဘူး၊ ဒါတွေက ရေရှည်အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။
Related Items:examination, Food, matriculation exam, Nutrition